‘झमक घिमिरे’ उठेर हिँड्दा सबै छक्क परे ! | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
‘झमक घिमिरे’ उठेर हिँड्दा सबै छक्क परे !
२१ असार, काठमाडौं। छ महिनाअघि रोजिता बुद्धाचार्यले छँदाखाँदाको सुन्दर कपाल खौरेर टाउको मुडुलो पारिन् । घरमा बुवा र दिदीहरुको गाली खाइने पक्का थियो । तर, जाडो महिनाको फाइदा ! ख्याप्प टोपी लगाएर घर गइन् ।
रोजिता थिएटर भिलेज लाजिम्पाटमा नाटक सिक्ने पहिलो ब्याचको उत्पादन हुन् । चार वर्षअघि कोर्स पूरा गरेयता ‘चारुमती‘ र‘मालिनी‘ का साथै अन्य तीनवटा अंग्रेजी नाटकमा अभिनय गरिसकिन् ।
झमकको घरमा अभिनयका क्रममा रोजिता
रोजिता सम्झिन्छिन् – ‘केही वस्तु समात्ने अभ्यास थाल्नुअघि खुट्टाका औंला फट्याउने अवस्थामा पुग्नु नै मलाई महाभारत थियो ।‘खुट्टाको अभ्यासमा पुग्नुअघि उनले हातबाटै बानी बसाउन थालिन् । दायाँ हात चलाउने उनले बायाँ हात बढी प्रयोगमा ल्याइन् ।
‘साढे एक वर्षको अभ्यास र झमक दिदीसँगको सरसंगतले म क्यारेक्टरबाट निस्किनै नसक्ने गरी विकसित भइसकेको थिएँ,’उनले भनिन् । पहिले आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न नसक्ने उनी अहिले आफ्नो जीवन नै परिवर्तन भएको पाउँछिन् । पहिले नाइँनास्ती र फरक मत नराख्ने उनी अहिले तर्कमा उत्रिन्छिन् ।
बौद्ध विहारमा परियत्ति शिक्षा पाँच कक्षासम्म पढेकी उनले त्यसबेला बुद्धकालीन कथा, बुद्धको जीवनी, दर्शन सरल भाषामा पढ्न पाइन् । त्यसले जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्यो । जीवन हर समय परिवर्तन भइरहने गुह्य जानिन् । समाज आफैंमा नराम्रो छैन,मान्छेले आफ्नो स्वार्थअनुसार यसलाई चलाउँदा खजमजिन्छ भनेर बुझिन् ।